‘पैसाको अभावका कारण अभियानबाटै बाहिरीनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ’ — News of The World
‘पैसाको अभावका कारण अभियानबाटै बाहिरीनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ’
संसार न्यूज संवाददाताआश्विन २५, २०७४
सुदूरपश्चिम कैलाली टिकापुरका हिक्मत थापा एनआरएनए अभियानमा चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन । उनी एनआरएनएका सक्रिय अभियन्ता मात्र नभएर विशेषत बैदेशिक रोजगारीका लागि दलालको प्रलोभनमा अफ्रिका पुगेर विचल्लीमा परेका, जेल परेका र अफ्रिकाका मुजरामा बेचिन बाध्य भएका नेपाली दिदीबहिनीहरु तथा दाजुभाइको उद्धारमा रातोदिन खटेर लाग्ने अभियन्ता हुन् । उनकै पहल र प्रयासमा अहिले अफ्रिकाका १७ देशमा एनआरएनए एनसीसी गठन भएका छन् ।
एनआरएनए नाइजेरियाका अध्यक्ष, दुई कार्यकाल अफ्रिका संयोजक तथा एक कार्यकाल केन्द्रीय कोषाध्यक्षको भूमिका सक्रिय रुपमा निभाइसकेका तथा बाँकी रहेका काम पूरा गर्नका लागि पुन : केन्द्रीय कोषाध्यक्षमा नै उम्मेदवारी दिएका उनै थापासँग एनआरएनए सम्मेलनको पूर्वसंध्यामा संसारन्युजडटकमले गरेको कुराकानी ।
कोषाध्यक्षमा पुन : उम्मेदवारी दिनु भयो नी के के छन ऐजेण्डा ?
मुख्य त संस्थालाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउनुनै हो । संस्थालाई दिगो आर्थिक श्रोत बनाएर अगाडि बढाउछु भन्ने हो । संस्थामा आर्थिकरुपमा संस्था बलियो नहुँदा राम्रा विचार भएका धेरै साथीहरु अभियानबाट पाखा लाग्नु परेको स्थिति छ । उहाँहरुको बौद्धिक क्षमतालाई संस्थामा लगानी गर्न पनि आर्थिक रुपमा संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो योजना हो । किनकी पैसा नभएकै कारण धेरै साथीहरु अभियानबाट खुम्चिएर बस्नु परेको छ । उहाँहरुलाई नेतृत्व लिन सहज होस् भनेर पनि संस्थालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन जरुरी छ ।
तपाइका जित्ने आधारहरु के– छन त ?
मैले एक कार्यकाल कोषाध्यक्ष बनेर धेरै अनुभव लिइसकेको छु । संस्थालाई सवल बनाउने काम सुरु गरिसकेको छु । त्यसलाई आधाबाटोमै छोड्नु भन्दा पूरा गर्नुनै संस्थाको हित हुन्छ भन्ने लाग्छ । नयाँ आउने साथीलाई पनि ५–७ महिना त्यसलाई बुझ्नै लाग्छ । फेरि उहाँले काम अगाडि बढाउँछु भन्दा छोड्नु पर्ने हुन्छ । अर्को कुरा मैले एनआरएनए नाइजेरियाको अध्यक्ष, दुई कार्यकाल अफ्रिकाको क्षेत्रिय संयोजक भएर काम गरिसकेको छु । संस्थामा मैले गरेको योगदानको मुल्यांकन साथीहरुले गर्नुहुनेछ नै । र अर्को एक कार्यकाल सुरु गरेका कामहरु पूरा गर्ने अवसर दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
संस्थालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन यहाँले २ वर्षमा के के गर्नु भयो त ?
धेरै योजनाहरु थिए । तर, त्यहिबेला मातृभूमिमा आपद् आइप¥यो । भूकम्पमा परेर पीडित हुनुभएका परिवारको घाउमा मल्हम लगाउनु प¥यो । त्यतिबेला भूकम्प पीडितका लागि राहत संकलनमै लागियो । त्यहि अनुरुप लाप्राकको एक हजार घर बनाउने प्रोजेक्टको जन्म भएको हो । त्यो काम भइरहेको छ । त्यसपछि बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा पनि अल्झिनु प¥यो । संस्थाको हितका लागि नभए पनि समग्र मातृभूमिको हितको लागि हामीले धेरै राहतका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेका छौं जस्तो लाग्छ । भूकम्पमा मात्रै हामीले ४० करोड रकम संकलन गरेका थियौं । त्यसले लाप्राकमा घरहरु बनिरहेको छ । अर्को संस्थाका लागि दिगो आर्थिक श्रोतहरुको योजना बनिरहेका छन् । त्यसलाई पनि यो कार्यकालमा पूरा गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ ।
सदस्यता शुल्क धेरै भयो भनेर विरोध भइरहेको छ नी ?
हो, त्यो ठिक कुरा हो । तर, सदस्यता शुल्कको केही प्रतिशत रकम कार्यालय संचालनमा पनि लगानी भएको छ । अहिले हाम्रो खर्च बार्षिक ७०÷७५ लाख छ । त्यो खर्च पनि त्यस्तै विभिन्न श्रोतहरुबाट पूर्ति गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म हामीले सम्मेलनमा उठेको पैसाबाट धानिरहेका छौं । त्यो एउटा श्रोत भएपनि अरु इन्भेष्टमेण्टबाट पनि केही प्रतिशत लिन सकिन्छ । बिभिन्न ब्रान्डिङबाट पनि केही प्रतिशत लिन सकिन्छ । अर्कोकुरा हामीले बनाउन लागेको तीन तले भवनबाट पनि आर्थिक जोहो गर्न सकिन्छ । भवनको एक तला भाडामा दिने निर्णय भएको छ । त्यसपछि हललाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ निश्चित पैसामा भाडामा दिएर आम्दानी लिन सकिन्छ । त्यो पनि एउटा बलियो श्रोत मानेको छु मैले । अर्को कुरा अबको नयाँ कार्यसमितिबाट नयाँ आर्थिक श्रोतहरु पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने आशा राखेको छु ।
संस्थामा आर्थिक पारदर्शिता र सुनिश्चितता कसरी दिनुहुन्छ ?
संस्थामा अहिलेसम्म आर्थिक पारदर्शीता रहेको छ । हामीले सबै आइसीसी तथा सबै देशका एनसीसीका साथीहरुलाई प्रत्येक तीन महिनामा एनआरएनएको आर्थिक गतिबिधिहरु अपडेट गराइरहेका छौं । त्यो मैले आफै गरिरहेको छु । संस्थामा आर्थिक रुपमा कुनै समस्या भएजस्तो लाग्दैन् । सबै क्लियर छ ।
भूकम्प पीडितका लागि तथा भवन लगायतका विषयमा दिन्छु भनेर बोलेको पैसा नआएको भन्ने सुनिन्छ नी त्यो कत्तिको सत्य हो ?
हो, त्यस्ता आपद् विपद्मा साथीहरुले मैले यति दिन्छु र उति दिन्छु भनेर भावुकतामा बोल्नुहुन्छ । पछि व्यवहारमा गा¥हो हुन्छ । फेरि बोली र लिखित रुपमा धेरै फरक हुन्छ । अर्को एउटा समस्या पनि भएको छ । साथीहरुले केन्द्रमा यति पैसा दिन्छु भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ । अनि एनसीसीमा त्यो पैसा लगेर दिनुहुन्छ । एनसीसीले त्यो पैसा हामीले कलेक्सन गरेको हो भनेर आफ्नो तर्फबाट पठाउँछ । दुवैतिर बोल्दा दुईतिर काउन्ट भएकोले पनि रकम बढी देखिएको हो । अर्को कुरा बोलेर नदिने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई एकपटक त्यो कुरा सम्झाएर नदिने हुनु भयो भने लिस्टबाटै उहाँहरुको नाम हटाउने भन्ने निर्णय भएको छ । यस विषयमा पनि छिट्टै क्लिीयर हुनेछ । भवन बनाउनका अहिले पनि आर्थिक रुपमा समस्या नै छ । तर, यो सम्मेलनमा त्यो पैसा उठ्छ भन्ने मैले विस्वास लिएको छु ।
यहाँ कार्यरत अफ्रिकन कम्पनी डांगोटे ग्रुपबाट पनि लगानी ल्याउने भन्नु भएको थियो नी त्यहाँ के भइरहेको छ ?
त्यो आउँछ झण्डै ५५–५६ अरबको प्रोजेक्ट हो । त्यो सफल भयो भने प्रत्यक्ष रुपमा हजार जना र अप्रत्यक्ष रुपमा ३–४ हजारले रोजगारी पाउँछन् । तर, देशमा लगानीमैत्री बातावरण अझै बनिनसकेकोले कानुनी जटिलताहरु आइरहेका छन् । हाम्रो कानुनमा कुनैपनि उद्योग संचालन गर्नका लागि ५० विगाह जग्गाका लागि मात्र स्विकृत गर्ने प्रावधान रहेछ । त्यसैले पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ । हामीले संचालन गर्न लागेको कम्पनीलाई २०० विगाह जमिनको आवस्यकता छ । अर्को कुरा धादिङमा खानी लिने भनेका छौं । खानीका लागि पनि खानी विभागले ३ महिना–६ महिना भनेर अल्झाइरहेको छ । काम हुन्छ भन्छन् । तर, हुँदैन् । सरकारले काम अगाडि बढाइदिए, अन्य विदेशी कम्पनीलाई पनि लगानी गर्न सहज वातावरण बन्ने थियो ।
अन्त्यमा तपाइको विचारमा एनआरएनए कस्तो बनाउनु पर्ला ?
सबै नेपालीहरुको साझा र सबैको समस्यामा सहयोग गर्ने संस्था बनाउनु पर्छ । एनआरएनए मेरो पनि संस्था हो । म, हामी सबै त्यसमा अटाउन सक्छौं भन्ने ढुक्क होस् । अहिले सम्म बौद्धिक क्षमता भएका साथीहरु बाहिरीनु परेको छ भने पैसा भएका साथीहरुले नेतृत्व सम्हाल्नु परेको देखिएको छ । यो सबैको समाबेशी होस् भन्ने मेरो चाहना हो ।